Homeसमाचारपृथ्वीनारायण मुर्दाबाद भन्दै थुक्न हिडेका आङकाजी शेर्पाको समुहलाई प्रहरीले रोके ! (भिडियो)
January 11, 2019 Spnews समाचार Comments Off on पृथ्वीनारायण मुर्दाबाद भन्दै थुक्न हिडेका आङकाजी शेर्पाको समुहलाई प्रहरीले रोके ! (भिडियो)
काठमाडौँ । नेपालको एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पृथ्वीनारायण शाहको दिव्ययोपदेशको स्मरण गर्दै आज राष्ट्रिय महत्वका साथ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले सिंहदरबारको पश्चिमढोका अगाडि रहेको शाहको शालिकमा माल्यार्पणका साथै अन्य कार्यक्रम गर्नेछन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सो अवसरमा उपस्थित भएका थिए ।
तर आदिवासी जनजाति हरुले भने कीर्तिपुरमा राजा पृथ्वीनारायण लाई थुक्ने कार्यक्रम राखेका थियो । खासगरी जनजाती सम्बन्ध समूह भने पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्तवादी र क्रुर शासक भन्दै विरोधमा उत्रिने गरेको छ । हरेक बर्ष झैँ यसपाली पनि उनीहरुले पृथ्वीनारायण लाई थुक्ने कार्यक्रम राखे प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
चर्का जातीय नारा उचाल्दै आउने मध्ये एक हुन – आङकाजी शेर्पा । प्राय हिन्दु धर्मावलम्बी तथा क्षेत्री ब्राह्मण समुदाय प्रति विष वमन गर्दै आइरहेका आङकाजी आज सरकारले मनाउने पृथ्वी जयन्ती प्रति पनि आक्रामक नै देखिएका छन् ।
उनले विहानै फेसबुकमा राखेको स्टाटस पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेकालाई आक्रोसित बनाउने किशिमको रहेको छ । उनले फेसबुकबाट पृथ्वीनारायण शाहको निन्दा गर्दै काठमाडौँको कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने कार्यत्रममा सहभागी हुन् पनि अनुरोध गरेको थियो ।
उनले कीर्तिपुर नगाउँ जाने दाेबाटाे मा दिउसो २ बजे पृथ्वीनारायणलाई थुक्ने भन्दै आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस राखेका थिए । उनले यो स्टाटस राखे लगत्तै उनको पक्ष र विपक्षमा कैयौले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पृथ्वीनारायण लाई थुक्न हिडेका आङकाजी शेर्पाको समुहलाई प्रहरीले रोकेपछि... (भिडियो सहित)